Làlana fizahan-tany manodidina an'i Madrid | Vaovao momba ny dia
Làlan'ny fizahantany manodidina an'i Madrid
Maria | | Tanànan'ny Espana, Madrid
Sary | OK isan'andro
Ankoatry ny maha renivohitr'i Espana azy, Madrid dia tanàna malalaka, cosmopolitan ary velona izay manana hetsika marobe atolotra ny mpitsidika azy. Ny mpitsangatsangana rehetra izay tonga ao an-tanàna dia manao izany noho ny antony hafa: ny fianarana, ny asa aman-draharaha, ny fialam-boly ... ny sasany mahita azy voalohany ary ny hafa miverimberina.
Ho an'ny sasany ary koa ho an'ny hafa, ny làlan'ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny Madrid dia fomba tsara hahafantarana azy satria loharanom-pahalalana izy ireo ary koa mahafinaritra. Ny renivohitra dia manana lohahevitra maro samihafa hisafidianana. Te hanao an'ity manaraka ity ve ianao?
1 Làlan'ny Noely
2 Làlana mamakivaky ny Barrio de las Letras
3 Làlana miafina
4 Làlana mamakivaky ny afovoan-tany Madrid
Krismasy dia iray amin'ireo fotoana manokana indrindra amin'ny taona, indrindra ho an'i Madrid izay miaina izany amin'ny fifaliana lehibe ary miezaka isan-taona handravaka ny arabe miaraka amin'ny antony vaovao hahagaga ny mpizahatany sy ny mponina.
Madrid dia tia Krismasy, ka izay no antony nanompoana azy nandritra ny herintaona hoe Naviluz. Fiara fitateram-baravarankely misokatra malalaka izay mamaky ny arabe sy ny làlan'ny foibe manan-tantara hisaintsaina ny filalaovan-jiro, loko ary endrika izay nandravahana ny tanàna tamin'ny daty manokana toy izany.
Ity dia iray amin'ireo làlam-pizahantany malaza indrindra any Madrid, noho izany dia zava-dehibe ny fitandremana ny datin'ny fanombohan'ny serivisy, izay mbola tsy nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy, satria tato ho ato dia lafo ny toerana. Naviluz dia kasaina hanomboka ny làlany manomboka ny alakamisy 28 novambra ary hanompo mandra-pahatongan'ny Three Kings Day.
Ankoatr'izay, amin'ity taona ity, ny iray amin'ireo zotra fizahan-tany amin'ny alàlan'ny Madrid mifandraika amin'ny Krismasy dia misy ifandraisany amin'ireo sehatra fahaterahana an'ohatra. fa amin'ny fotoan'ny Krismasy manaraka dia hapetraka ao Puerta de Alcalá, ary koa ao Puerta de Toledo, Puerta de San Vicente, Ben'ny tanàna Plaza ary Viaducto de Segovia.
Làlana mamakivaky ny Barrio de las Letras
Sary | Hostal Oriente
Ny miresaka an'i Madrid dia miresaka momba ny kolontsaina. Eo akaikin'ny Triangle Art Madrid (Museo del Padro, Museo Thyssen-Bornemisza ary Museo Reina Sofia) dia mahita tanàna manodidina izahay izay miaina boky, ilay antsoina hoe Barrio de las Letras.
Mahazo an'io anarana io izy satria maro amin'ireo mpanoratra espaniola lehibe no nanorim-ponenana tao nandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX: Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Quevedo ary Calderón de la Barca.
Ny trano sasany dia tafavoaka velona tamin'izany fotoana izany, toa ny Casa de Lope de Vega, ny fiangonan'i San Sebastián na ny trano fivorian'ny Trinitarians Barefoot (toerana misy ny fasan'i Cervantes).
Miaraka amin'ireto mpanoratra ireto dia nipoitra koa ny valan-javaboary voalohany toa an'i El Príncipe (ilay teatra Espaniôla ankehitriny), ny milina fanontam-pirinty toa an'i Juan de la Cuesta na ireo lefitry ny mpanao hatsikana.
Taty aoriana, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ireo andrim-panjakana malaza toa ny Royal Academy of History na ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria (trano samy ambony) dia tao amin'ny Barrio de las Letras. Ary taonjato vitsivitsy taorian'izay dia ho tonga ny foiben'ny Madrid Athenaeum, ny lapan'ny Hotely ary ny lapan'ny fitsarana.
Ity no iray amin'ireo làlana fizahan-tany tsara indrindra amin'ny alàlan'i Madrid mahita ny literatiora Madrid tamin'ny vanim-potoana volamena, vanim-potoana kanton'ny fiteny Espaniôla. Izy io koa dia toerana iray hijanonana eny an-dàlana hankafizan'ny gastrikan'i Madrid izay manomboka amin'ny fomban-drazana indrindra ka hatrany amin'ny zava-baovao ao an-dakozia. Ny Barrio de las Letras dia feno bara sy trano fisakafoanana misy rivo-piainana be dia be.
Sary | Wikipedia
Tsy misy fomba tsara kokoa hahafantarana tanàna iray noho ny fahaverezan'ny very eny an-dalambe, eny fa na dia ireo izay efa nisehoan'ireo angano sy mistery aza. Feno amin'izy ireo ny ivon-toerana manan-tantara ao Madrid.
Hanomboka ao amin'ny House of the Seven Chimneys fanta-daza isika, toerana fivahiniana masina marina ho an'ireo tia ny paranormal. Voalaza fa ao amin'ity trano miorina ao amin'ny Plaza del Rey ity dia miseho eny ambonin'ny tampon-trano ny fanahin'ny olon-tiana Mpanjaka Felipe II.
Ary manomboka amin'ny trano misy matoatoa mankany amin'ny iray izay mavesatra ozona: ny trano voaozona Madrid dia miorina eo amin'ny Antonio Griso Street, izay nahitana heloka bevava mahatsiravina ny rindriny. Ny sasany milaza fa, satria ireo hetsika ireo, voaozona ilay fananana.
Ao amin'ny Plaza de la Paja dia azontsika atao ny mahafantatra ny angano mivezivezy manodidina ny Mudejar Tower an'ny fiangonan'i San Pedro El Viejo. Voalaza fa napetraka teo amin'ny toerany ny lakolosy voalohany tao amin'ny tilikambo nefa tsy nisy olona nila nitondra izany hatrany an-tampony.
Araka ny hitanao, tsy ny tantara miafina rehetra ao Madrid no nifanaraka tamin'ny fomba mitovy rehefa mandeha ny fotoana ary ny sasany amin'izy ireo dia toa ampahany amin'ny literatiora mahafinaritra.
Ny mahazatra ao amin'ny angano sy ny mistery an'i Madrid dia ny Palacio de Linares, ao amin'ny Plaza de Cibeles. Voalaza fa matoatoa no mipetraka ao an-dapa ary na psychofonia aza dia re hatrany.
Làlana mamakivaky ny afovoan-tany Madrid
Sary | Pixel
Madrid, renivohitr'i Espana, dia manan-javatra betsaka atolotra ary ny làlana iray mamakivaky ilay ivon-toerana manan-tantara dia hahafahantsika mahalala ireo toerana misy azy indrindra.
Ny làlan-kizorana dia afaka manomboka, ohatra, ao amin'ny Plaza de la Independencia, izay mampiseho toerana roa tena lehibe ho an'ny olona ao Madrid: ny Puerta de Alcalá sy ny Parque del Retiro. Manaraka an'i Calle Alcalá dia tonga ao amin'ny Plaza de Cibeles izahay, tranon'ny sary sokitra malaza sy ny lapan'ny tanàna. Avy eo dia mankany amin'ny Gran Vía sy ireo tranobe manaitra antsika izahay eo anelanelan'ny taonjato faha-0 sy faha-XNUMX. Maka an'i Calle Montera dia tonga any Sol, kilometatra XNUMX renivohitra misy ilay sary sokitra malaza an'ny Bear sy ny Strawberry Tree, tandindon'ny tanàna.
Làlana fiantsenana malaza be dia be no manomboka any Puerta del Sol, toa an'i Calle Preciados, Calle Arenal na Calle Carretas. Saingy amin'ity làlana mandeha mamaky an'i Madrid ity dia hanohy hiaraka amin'ny Ben'ny Tanànan'i Calle izahay mandra-pahatongantsika any amin'ny Plaza Ben'ny tanàna, iray amin'ireo toerana malaza indrindra ao afovoany manan-tantara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Làlan'ny fizahantany manodidina an'i Madrid
Ny tsara indrindra azonao atao sy jerena ao Aotrisy
Inona no ho hita any San Antonio, Ibiza